Koeman oo shaaca ka qaaday sababta ka dambeysay guuldarradii Barcelona ay kala kulantay Granada – Gool FM
(Barcelona) 30 Abriil 2021. Tababaraha Barcelona ee Ronald Koeman ayaa ka soo muuqday shir jaraa’id si uu uga hadlo guuldarradii kooxdiisa ka soo gaartay Granada.
Granada ayaa guul ka soo gaartay kooxda Barcelona oo ay ku booqatay garoonka Camp Nou, kaddib markii ay kaga soo adkaatay 1-2, Barcelona ayaa wali ku jirta booska saddexaad waxayna iska lumisay fursad ay kula wareegi laheyd hoggaanka horyaalka La Liga, iyadoo ay min 71 dhibcood wadaagaan Real Madrid oo booska labaad ku jirta.
Haddaba ciyaarta kaddib Ronald Koeman oo ka soo muuqday shir jaraa’id ayaa wuxuu u sheegay warbaahinta.
“Waa natiijo aad u niyad jab leh, waa dharbaaxo xoogan, laakiin waxaan ku kalsoonahay nafteena, hadda kulanka Axada ee Valencia wuxuu noqon doonaa go’aan.”
“Kooxaha oo dhan waxay isbadal ku sameeyaan safkooda, waxaan dareemeynaa daal fara badan, waana intaas, waxaan marwalba isku dayaa inaan wanaajiyo xaallada kooxda marka loo eego duruufaha jira.”
“Guuldarradii maanta waxaa sababay feeljignaan la’aan dhanka daafaca ah, goolkii ugu horeeyay, waxay aheyd in kubadda la jaro, sidoo kale waxay aheyd in la yareeyo boosaska, waan niyadjabnay, waa inaan isku daynaa inaan guuleysano dhamaan shanta kulan ee harsan.”
“Ciyaarta Axada waxay noqon doontaa mid go’aamisa ku guuleysiga horyaalka, waa inaad u dulqaadataa guuldarrada, oo aad ka fikirtaa kulanka soo socda, waa inaan wax ka baranaa qaladaadkii qeybtii labaad, weli wax badan ayaa dhiman, ma jiri doonaan kulammo fudud ee koox kasta ah ilaa iyo dhamaadka.”
Intaas kaddib Ronald Koeman ayaa ka hadlay kaarkii roosaha uu qaatay inta ay ciyaarta socotay, wuxuuna yiri:
“Ma fahmin ceyrinta, ma aflagaadeyn garsooraha afaraad ama wax kale, waan layaabay ceyrinta, laakiin haddii uu garsooraha doonayay inuu noqdo geesiga sheekada, markaas wuu ku mahadsan yahay, waxaan arki doonaa waxa garsooraha ku qoro warbixintiisa.”